Laftagareen’Musharraxiinta is hubeynaya waxaan ula dagaallamaynaa sida al-Shabaab’ | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Laftagareen’Musharraxiinta is hubeynaya waxaan ula dagaallamaynaa sida al-Shabaab’
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xassan Maxamed “Laftagareen” ayaa si kulul uga hadlay dad uu ku sheegay musharraxiin xilal raadinaya oo is hubeynaya.
Ma uusan caddeynin cidda loo hanjabayo, isaga qudhiisana wuxuu sheegay in uusan wali fahansaneyn dadka ay ku socoto hanjabaadda uu xusay.
“Ninka loo soo dhaaranaayo ayaan fahmi waayay. Ma waxaa loo hanjabayaa 100-ka qof ee ergada ah? Ma waxaa loo dhaaranayaa maamulka? mise waxaa la yasayaa Koonfur Galbeed?”
Laakiin waxa uu ballan qaaday in uu sugi doono amniga dadka wax dooranaya.
“Doorasho waa tii dadka wax dooranaya la tuugi jiray, wax la siin jiray, oo been iyo run la isugu dari jiray, laakiin haddaad dhahdo waan idin dhammeynayaa oo hub baan idiin soo qaadanayaa, waa tii shabaabka oo kale. Dadka wax dooranaya ee shacabka ah waxaan u ballan qaadayaa inaysan jiri doonin cid nabad galyadooda waxyeelleyn karta.”
Wuxuu sheegay in ilaa 27 saldhig oo ciidan ah ay ku yaallaan magaalada Baydhabo, askartuna ay heegan ugu jiraan sidii loo sugi lahaa amniga.
“Qof walba oo reer Koonfur Galbeed ah waxaan kusoo dhaweyneynaa gacmo furan, kan wax dooranaya iyo kan la dooranayo amnigooda anaga ayaa ballan qaadnay. Cid walba oo khalkhal galinaysa iyo al-Shabaab waa isugu kaaya mid waana ka qabaneynaa,” ayuu yidhi laftagareen.
Doorashada Aqalka Sare ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa la filayaa inay dhacdo dhawaan. 31-kii bishii July ayuu madaxweyne Laftagareen soo saaray liiska murashaxiinta u tartami doona kuraasta Aqalka sare ee maamulkaas.
Safiirka Soomaaliya ee Uganda oo la kulmay Gudoomiyaha Baarlamaanka Dalkaasi
DHAGEYSO:-Warka Habenimo Radio Baidoa 21-9-2021
Wasiirka Gaashaandhigga oo Muqdisho shir uga furay guddi ka soo shaqeynaya ka bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya
Wasiirka Gaashaandhigga oo Muqdisho shir uga furay guddi ka soo shaqeynaya...
MW Farmaajo oo Warqadaha Aqoonsiga ka Guddoomay Safiirro
Madaxweyne Laftagareen oo magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleed Koonfur...